ညအိပ်စဉ် ဟောက်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှူရပ်ခြင်း - Hello Sayarwon
ညအိပ်စဉ် ဟောက်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှူရပ်ခြင်း
Dr. Seinn Moe Satt မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူတစ်ရာမှာ နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းဟာ အိပ်စက်ချိန်မှာ ဟောက်ကြလေ့ရှိပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် အဝလွန်သူတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်..။ အသက်ကြီးလာလေ…. ပိုဟောက်နိုင်ခြေများလေလဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
တကယ်တော့ ဟောက်တယ်ဆိုတာ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ရဲ့အနောက်…. အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်နေရာရာမှာ …. ပိတ်နေလို့ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ မယူဆသင့်ပါဘူး..။
လျှာနဲ့ လည်ချောင်းရဲ့ တစ်နေရာရာက ကြွက်သားတွေ ပျော့တွဲနေတဲ့အခါ… ပါးစပ်နဲ့လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားမှာ တစ်ရှူးထုထည်များနေတဲ့အခါ… လည်ပင်းမှာ အဆီပိုတွေများနေတဲ့အခါ….နှာခေါင်းရောင်ယမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် နှာခေါင်းထဲမှာ အဖုအကြိတ်တစ်ခုခုရှိနေတာ…နှာခေါင်းအကန့်စောင်းတာမျိူးကြောင့်လဲ ဟောက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ကလေးတွေမှာ ဟောက်တယ်ဆိုရင်တော့… အာသီးယောင်တာ… ဒါမှမဟုတ် adenoid လို့ခေါ်တဲ့…နှာခေါင်းအနောက်က ပြန်ရည်တစ်သျှူးရောင်ယမ်းတာကြောင့် ဖြစ်ဖို့များပါတယ်..။
ဟောက်တာဟာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ သဘောမထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းေတွအများကြီးရှိပါတယ်..။ တကယ်တော့
ဟောက်တာဟာ အသက်ရှူရပ်တာနဲ့ တွဲတတ်ပြီး OSA လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါကြီးရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်…။ ဒီရောဂါကြောင့်…လူမှူရေးမှာလဲ ပြသနာတွေအများကြီး ကြုံနိုင်သလို….. ခန္ဒာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုလဲ သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်.။ သွေးတိုး… ဆီးချိူ နဲ့ နှလုံးရောဂါအပါအဝင် နာတာရှည်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်သလို … အာရုံစူးစိုက်မှူကျဆင်းတာ …. နေ့လည်မှာ အရမ်းငိုက်မြည်းတာကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်နိုင်တာ…. လူရဲ့ personality လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲ ကျဆင်းသွားတာ…လိင်ကိစ္စ စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းကျဆင်းတာ… စိတ်မပါတာ…. မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်တာတွေနဲ့ပါ ဆက်စပ်နေတာပါ…။
Sleep Study (Polysomnography) လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာမှူလုပ်သင့်ပါတယ်..။ ဒီလေ့လာမှုကို အိပ်စက်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်က စောင့်ကြည့်လေ့လာရတာဖြစ်ပြီး….. ညအိပ်စဉ်မှာ စက်တပ်ပြီး တစ်ညတာ အိပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီ sleep study ကနေတဆင့် …. နှလုံးအတွက် အီးစီဂျီ…. ဦးနှောက်ရဲ့ အီးအီးဂျီ….. အိပ်နေစဉ်သွေးထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိတယ် …. အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ရပ်သွားတယ် ….. ရင်ပတ်နဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုပါသိနိုင်ပါတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် sleep study ကို…. အချို့သော အစိုးရဆေးရုံတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေမှာ လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း ဆရာဝန်နဲ့လဲ ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်..။ သင့်ကို ဆရာဝန်က မှန်ပြောင်း အသေးစားလေးနဲ့ ပါးစပ်..နှာခေါင်းနဲ့ နှာခေါင်းအနောက်.. လည်ချောင်းနေရာတွေမှာ ပိတ်ဆို့မှုရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီး သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ကုသမှုကို လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..။
အရက်….ဘီယာနဲ့ အိပ်ဆေး..စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ သုံးစွဲမှုကနေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အစားတွေအပြည့်အဝစားပြီး တန်းအိပ်လိုက်တာမျိူးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လမ်းလျှောက်တာ..ပြေးတာ… ကြိုးခုန်တဲ့ စသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်း တစ်မျိုးမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်..။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့မှ မသက်သာဘူးဆိုရင်…. နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆရာဝန် တစ်ဦးဦးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကုသသင့်ပါတယ်..။
ကုသမှုတွေမှာ….CPAP လို့ခေါ်တဲ့ စက်တပ်ပြီး အိပ်စေတာ… Radiofrequency လို့ခေါ်တဲ့ နည်းကို သုံးပြီး ပျော့တွဲနေတဲ့ တစ်ရှူးတွေကို တင်းရင်းအောင်လုပ်တာ… ကြီးနေတဲ့ အာသီးကိုဖြတ်ထုတ်တာ…. နှာခေါင်းအကန့်ကောက်နေတာမျိုးကို ကုသေပးတာ….
အာခေါင်ပျော့နဲ့ လျှာအပါအဝင် လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ ပျော့တွဲနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပိတ်နေတဲ့ တစ်ရှူးတွေကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပေးတာမျိုးအထိ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း )
အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဟောက် တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်၊ လျှော့ချ ကြမလဲ။
သင် အိပ်ရင် ဟောက်တတ်ပါသလား။ ဒါလေးတွေ စမ်းကြည့်ပါ။ သက်သာပါလိမ့်မယ်။ ။
အိပ်ဟောက်တတ်တဲ့ကလေးတွေမှာ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်